Home विचार / दृष्टिकोण गड एन्जल र स्वर्गको यात्रा
१५ /१६ वर्षअगाडि धरान पुग्दाको कुरा हो। एकजना खोटाङ रतन्छाको दिदीसँग भेट भयो । उहाँ किरात धर्मको धूरन्धर प्रचारक हुनुहुन्थ्यो । आफूत जन्मजात राई किराती । किरात धर्म भने बल्ल आफूसामु कसैको मूखबाट नयाँ उत्साहकासाथ नयाँरूपमा आफ्नो अगाडि पेश भइरहेको थियो । किरात धर्म भनिए पनि किरातजातिहरूले परम्परागतरूपमा चलाइआएको रीतिरिवाज, चालचलन र संस्कारसँग ठिक विपरित रहेको उक्त नयाँ धर्मका प्रवर्तक भने उदयपुर जिल्ला मैनामैनी गाउँका एकजना राईका छोरा हुनुहुँदो रहेछ (भक्त ब. राई)। तर तेस बेला उहाँको नाम सत्गुरु बालतवस्वी ओमनन्द मात्र भनिएको थियो । त्यसबेला भनिएको थियो कि उहाँ बाल्यकालमै तपस्या गर्न जंगल जानु भएको र आज जे जति ज्ञान दिन सक्ने हुनु भएको छ त्यसै अवस्थामा अध्ययन गर्नु भएको । त्यतिमात्र होइन उहाँ धेरै भाषाको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ भनिएको थियो ।
त्यसपछि ति दिदीले केही पुस्तक र अडियो क्यासेट दिनु भयो । अडियो क्यासेटमा भएको बालतपस्वी ओमनन्दको धार्मिक प्रवचनले खास प्रभाव नपारे पनि किरात धर्म भनिएकोमा भने मलाई केही कुराहरू खड्की रहेको थियो । उता लिम्बूवानमा पनि इलामको माङसेबुङमा आत्मनन्द लिंदेनले किरात धर्म नै भनेर अर्को खाल जमाइसकेको हुनाले यस नयाँ ओमनन्दको किरात धर्म र उताको आत्मानन्दको किरात धर्मबीच कुनै न कुनै अन्तरसम्बन्ध होला भन्ने लागेको थियो । पछि केही अपुष्ट कुराहरू सुन्नमा आए ओमनन्द पनि उही आत्मानन्द लिंदेनको साथमा केही समयसँगै काम गरेर केही कुरामा मनमुटाव भएपछि छुट्टिएर यतातिर अर्को किरात धर्मको खाल जमाएको हो । धर्मको नाम एउटै र धर्मको मुल प्रकृति पनि एउटै (जस्तो दुवैले काटमार नगर्ने, माछामासु नखाने, जाड रक्सी नचलाउने र चूलो पूजा नगर्ने) भएको यसका अगुवाहरूको उपनामहरू पनि आत्मानन्द र ओमनन्द उस्तै लाग्ने जम्ल्याहा दाजुभाइजस्तो भएकोले हो कि जस्तो लाग्दथ्यो । एक किसिम यो पछिल्लोचाहिँ उताको नक्कल गरेजस्तो लाग्ने । आफू नास्तिक भौतिकवादी भएकोले यी यस्ता नयाँ लेवल लागेर आएका अध्यात्मवादी हुन वा परम्परागत अध्यात्मवादी मेरो जहिलेपनि चासोको विषय भएपनि यो मेरो प्रतिपक्षको बिषय हो ।
हङकङ बसाइको केही समयपछि (आजभन्दा सात-आठ वर्षअगाडि हुनुपर्छ) १५ /१६ वर्षअगाडि किरात धर्मका प्रवर्तक भनिएको उही बालतवस्वी ओमनन्द हङकङ पनि आउनु भयो रे भन्ने सुनियो । तर यसपटक हङकङ आऊँदाको बखत किरात धर्मकोरूपमा नभएर स्वर्गीकमार्गको पथ प्रदर्शककोरूपमा आउनु भएको थियो । स्वर्गीकमार्गलाई अंग्रेजीमा हेवेन्लीपाथ (heavenly path) भनिएकोछ । अब यो धर्म किरातहरूको मात्र किरात धर्म नभएर गैर किरातहरूको पनि स्वर्गीक मार्ग बन्ने प्रयत्नमा लागेको रहेछ भन्ने लाग्यो । यसअवस्थासम्म आइपुग्दा यस भूतपुर्ब किरात धर्म र तत्कालीन स्वर्गीक मार्गको मुल गुरु वा पथ प्रदर्शकको उपनाममा अर्को उपनाम पनि थपिन गएको रहेछ र (सत्गुरु बालतवस्वी ओमनन्द सुप्रिममास्टर गड एन्जल) भनिँदो रहेछ । उहाँका अनूयायीहरूलाई पनि एन्जल (angel)भनिँदो रहेछ । त्यसबखतदेखि उहाँको अनेक किम्वदन्तीहरू पनि बूनिएर उहाँलाई एउटा दैविक शक्तियुक्त भएको भ्रम फैली सकेको रहेछ । जस्तो कि ओमनन्दले कैयौ पटक मर्न खोजे तर मर्नबाट बचिरहे । पहराबाट हाम्फालेर मर्न खोजे तर प्वाख जस्तो हलुका भएर जमिनमा सकुसल ओर्लिए । नदीको भेलमा हेलिएर मर्न खोज्दा पाखामा सकुसल उतारिए । शंका लागेर पुलिसले पक्रन खोज्दा नेल आफैं चुडिएको आदि । हेवेन्लीपाथ भइसकेपछि नेपालमात्र नभएर सिक्किम लगायत नेपालीहरू रहेका विभिन्न देशहरूमा सबैजातजातिहरूलाई समेत समेट्न शुरु गरे पनि किरातहरूको बीचमा भने उहाँलगायत उहाँका अनुयायीहरूले यो किरातहरूकै धर्म हो नी भन्न भने छोडेको थिएन र आजपर्यान्तसम्म यो क्रम जारी नै रहेको छ ।
स्वर्गको यात्रा कसरी ?
मेरा केही आफन्त र साथीहरू पनि हेवेन्लीपाथको अनुयायी भएको र यसको कुनै न कुनै कार्यक्रमहरूले कहिलेकाहीं छुने भएकोले यसको कार्यक्रमहरू, गुरुको प्रवचनको क्यासेटहरू हेर्ने सुन्ने अवसर मिल्यो । सुन्नमा आएको थियो, ध्यान गर्दागर्दै यसका भक्तहरू स्वर्गमा पुग्नेमात्र होइन मरेर गएका आफन्तहरूलाई पनि भेट्छन् । एउटा कार्यक्रमको क्यासेटमा यस्तो दृश्य देखियो ।
एउटा भव्य मञ्चमा सुप्रिममास्टर आशिन छन् । उनको सेतो रंगको पहिरन शिरमा मुकुट जस्तो लाग्ने विशेष आकर्ष छ । बाजाको आकर्ष धुन आफ्नो शुरमा बजिरहेको छ । आफना भक्तहरूलाई अगाडि पलेटी मारेर हात मुट्ठी पारेर आँखा चिम्लेर बसाइएको छ । यसपछि सुप्रिममास्टरले फलाक्न थाल्छन्, एउटा शैलीबद्धसँग । जस्तो, "-------अहिले तपार्ई आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, अब तपार्ई बाहिर निस्कनु होस् तपार्ई निस्कँदै हुनुहुन्छ, तपाईं निस्कनु भयो, निस्कनु भयो । अब तपार्ई आफ्नो बगैंचातर्फलाग्नुहोस् , तपार्ई अहिले बगैंचातर्फलाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्दै हुनुहुन्छ । अब त्यहाँ तपाईंले एउटा कागती टिप्नुहोस्, तपाईंले कागती टिप्नु भयो । अब तपार्ई आफनो घरतर्फलाग्नुहोस् । अब तपार्ई घरतर्फलाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्दै हुनुहुन्छ । तपार्ई अब घर पुग्नुभयो । अब एउटा चक्कु लिनुहोस्, तपार्ईले चक्कु लिनुभयो, लिनुभयो -------" आदि ।
यसपछि आखाँ चिम्म गरेर बसेका भक्तजनहरूमध्ये केही एकोहोरिएर हात ठड्याएको ठड्यायै देखिन्छन् र कामेको पनि देखिन्छन् । र उसलाई देवता चढेको भनिन्छ । एवं रितले यस्तै हालतमा अझ सुनसान कोठामा मानिसलाई एकोहोर्याएर कल्पनै कल्पनामा डुबाइन्छ । हिमाल जंगल नदी हुँदै बगैचा र स्वर्गको स्थानमा पुगेको कल्पनामा डुबुल्की मार्दै त्यहीँ मरेका आफन्तलाई भेटेको कल्पनामासम्म पुग्दछन् । र यसैलाई मानिस स्वर्गमा पुगेको अर्थ लगाइन्छ । माइकल ज्याक्सनको गीत र डान्स हेरिरहेको दर्शकहरू मध्ये केहि दर्शकहरु पनि यसरी नै लट्ठ परेर बेहोस हुन्छन् । र एम्बुलेन्समा हस्पीटल लगिन्छ । सम्मोहनको राम्रो प्रयोग भएको भन्दा बढ्ता केही पनि पाइँदैन यी माथिका दुबै क्रियाकलापमा । आफ्नो विश्वास र उदेश्यकोलागि मनलाई एकाग्र गरेर ध्यान र योगा जस्ता कृयाकलापको परिस्कृत रुपलाई आज मेडिटेशन(meditation) भनिएको छ , जो आजभोली जो सुकै मान्छेपनि गर्दछ । यस्ता मेडिटेशन र सम्मोहनको बारेमा रत्तिभर ज्ञान नभएका सोझा र अवोध ब्यक्तीहरुको माझमा आफु गडएन्जल बनेर रमाइ रहेकाछन हाम्रा भक्त बहादूर भाई ।
एकाग्र मन लिएर बसेपछि अनी मन एकोहोरिएपछि मान्छे कल्पनाको अनेकौं किसिमका संसारमा पुग्नु एकदम स्वभाविक कुरा हो । हामी आफैँ पनि एक्लै वा यस्तो वातावरणमा कल्पनामा डुब्दा झुप्रो नभएको एउटा गरिबले महलमा बसेको देख्न सक्दछ । यसरी मन एकोहोरिएको बेला पहाड जंगल हिमाल नदी बगैचा दरवार जस्ता कल्पनाको संसारमा पुग्नु सामान्य कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै मान्छेहरू स्वर्गको भ्रममा परेर मख्ख हुनु पनि अनौठो होइन । आज सामान्य संसारको सामान्य ज्ञानको ढोका यति खुल्ला भएको छ कि र पनि मान्छेमा मरेपछि के भइने हो, र मर्नु भन्दा अगावै स्वर्ग वा यस्तै स्थान कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चिन्ताले बाँचिरहेका अन्धविस्वासी मान्छेहरूको कुनैकमी छैन यो संसारमा । यही अन्धविस्वासीहरूको हूलभित्र चलखेल गर्ने हुन यी स्वघोषित भगवान वा भगवानका दूतहरू । देउता बन्ने रहरले ढुंगा बन्छ मान्छे भनेझै सच्चाइमा बाँच्नु पर्ने जिन्दगी नै मरेतुल्य बनाइरहेका छन् । यो माथिको क्रियाकलाप पनि मर्नभन्दा अगावै खुट्टा तान्नु जस्तो हो ।